China 6 mu1 USB3.0 mini DP kusvika HDMI USB3.0 RJ45 SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 5 vagadziri nevatengesi |Wellink
6 mu1 USB3.0 mini DP kuenda kuHDMI USB3.0 RJ45 SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 5
• Dhizaini yeSurface Pro 4/5/ 6: Mini DP uye 2-Port USB 3.0 ine 100M Ethernet Lan, isina musono inokwana neSurface Pro 4/ 5/ 6, wedzera nzvimbo yako kune zvimwe.Ongorora: Iyi yepamusoro pro dock haikodzeri nzvimbo yako zvakanaka kana ukashandisa yekudzivirira pairi.Ndokumbira utarise: chiteshi ichi hachikwane pamusoro pro 3 uye yepamusoro pro 7 laptop.
• Hi- Res 4K HDMI + 4K MiniDP: Iva nekristaro yakajeka 4K HDMI/MiniDP vhidhiyo pane anowirirana 4K mamonitor kune inopenya yepamusoro-resolution kuratidza.Inoda yakananga HDMI kuHDMI kana MiniDP kuMiniDP/DP kubatana.
• 6 mu1 USB 3.0 Hub & Kadhi Reader: 2x 5Gbps USB-A 3.0 chiteshi, 1x 100M Ethernet LAN, 1x mini DP kusvika HDMI (4K@30Hz, 1080p@60Hz), 1x SD card kuverenga kadhi, 1x micro SD/ TF chiteshi chekuverenga kadhi, 1x Gigabit LAN RJ45 chiteshi.
• Yakasiyana uye Yakawedzerwa Dhizaini: Yakakosha bevel- side uye compact dhizaini yeiyi USB hub inonyatsoenderana neyako Surface Pro 5/pro 6/pro 4 Uye isina waya dhizaini inoita kuti desktop yako iwedzere kuchena uye kurongeka.Nepo aluminium kesi inodzivirira chimiro uye nyore kusunungura kupisa.Chiedza-huremu chakanakira kufamba kana rwendo rwebhizinesi.Iro zano rakanaka rebasa repamusoro reWindows 10, 8, 7, XP system.
• Plug and Play &Hot Swappin:Hapana kuiswa kwemutyairi kunodiwa.3 ports USB 3.0 ine kukurumidza kukuru kusvika ku5Gbps, kuendesa nekukurumidza, kuchengetedza yakawanda yenguva yako uye kunakidzwa nekufambisa data mumasekonzi.Ichi chiteshi chepamusoro chepamusoro chinoshanda neU disk, hard drive disk, mbeva, keyboard uye zvimwe USB zvishandiso.Inopindirana zvakanakisa neNew Microsoft Surface Pro 2017/ Pro 5. 12 mwedzi waranti uye hapana kunetseka nekudzoka kana kudzoserwa.
Mubvunzo:Ko madoko anowirirana neSurface Pro 3?
Mhinduro:Iri doki harikodzeri pamusoro pro 3 uye pamusoro pro 7 laptop.
Mubvunzo:Izvi zvinoenderana neSurface 3 here?
Mhinduro:Iyi yepamusoro docking chiteshi chakanyatsogadzirirwa Microsoft Surface Pro 6/ Surface Pro 5/ Surface Pro 4.
Mubvunzo:Izvi zvine gigabit lan kana 100mbps?kumusoro kunoti 100mbps uye tsananguro yepasi inoti gigabit.
Mhinduro:Ichangosimbiswa, ndeye 100 mbps.1 kunyora kumusoro kunoti 100M imwe inoti 1G.
Mubvunzo:izvi zvinouya nemicro USB yesimba here?Ini handizvione mune chero yemifananidzo asi inotaura nezvazvo murondedzero.
Mhinduro:Iyo hub docking station haina, iyo yepamusoro pro 4 ine micro USB port pairi.
Mubvunzo:Izvi zvinoenderana nepamusoro laptop (1st chizvarwa)?Ndine usb- 3, mini kuratidza uye jack kubuda.
Mubvunzo:Izvi zvinoshanda here paSurface 2 laptop?
Mhinduro:Tine urombo.Iyi dhoki haikodzeri pamusoro pro 3,surface pro 7 uye Surface 2 laptop.
Mubvunzo:Izvi zvichakwana here kana ndine Surface Dock charger yakabairirwa panzvimbo pechaja yenguva dzose?
Mhinduro:Kana ne "Surface Dock Charger" uchireva iyo standard charger inouya neSurface saka mhinduro ndihongu.Pane nzvimbo yezvose zviri zviviri.
Mubvunzo:Izvi zvinogona kushandiswa kubatanidza mamwe mamonitor?
Mhinduro:Inobvumira imwe monitor.Ndine 29" LG monitor. Haizadze skrini yese. 3/4 yacho zvachose.
Mubvunzo:Inoenderana here neSurface Pro 7?
Mubvunzo:Ndingashandise izvi kubatanidza mamonitor maviri kune yangu Surface Pro4?
Mhinduro:1 foni uye imwe yekutarisa inogona kubatana
Mubvunzo:Izvi zvinoshanda here ne5th gen surface pro?
Zvakapfuura: 13 mu1 Dual USB3.1/Type-C kuenda kuHDMI RJ45 Type-C PD SD/TF Audio Docking station yeMacbook
Zvinotevera: 6 mu1 USB3.0+ mini DP kusvika HDMI+ USB3.0 + SD/ TF Docking chiteshi cheSurface Pro 4